၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဆေးဘက်ပညာသည်ကျောင်းအဖြစ် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၂၀) ရက်တွင် ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင်မှု တက္ကသိုလ် စတင်ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ (၃၀) ရက်တွင် ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင်မှု တက္ကသိုလ်အဖြစ် ယခင် ဘီအိုစီကောလိပ် (သထုံလမ်း) တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် သင်ကြားရေး ဘာသာရပ်များတွင် ဇီ၀ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်ကို သီးသန့်ခွဲထုတ်ကာ စတင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၇) ရက်တွင် ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင်မှုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ဟု မြောက်ဥက္ကလာ၊ ​​ဝေဘာဂီမြို့သစ်တွင် ပြောင်းရေွှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ဆေး၀ါတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
543 Bachelor of Pharmacy (4 years)
40 Master of Pharmacy (2 or3years)
9 Ph. D program (3 years)
103 Total number of Academic staff
Kahtein Robe Offerring Ceremony
UOP ThinGyan (Water) Festival
List of Viva Candidates (M.Pharm. and Ph.D.)
Grade Credit Meeting